Faah Faahin: Taliyaha Booliiska Puntland Oo Dhaawacay Ku Xigeenkiisa – Goobjoog News
Xabadda haleeshay Taliye ku xigeenka Booliska Puntland ayaa uga dhacday jilibka, wararka ayaa sheegay in gacan ka hadal dhexmaray taliyaha iyo guddoomiyaha ay sababtay in taliyuhu uu bastoolad u xirnayd la baxo oo rasaas ku furo guddoomiyaha.
halkaasi waxaa ku sugnaa Wasiirka Amniga Puntland, Taliyaha Booliiska iyo kuxigeenkiisa, guddoomiyaha gobalka gobolka Nugaal iyo Taliyaha la dagaalanka Argagixisada Puntland.
Isku dhacan ayaa ka dhacay habeenkii xalay ahaa hoteel ku yaalla magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal, iyadoo halkaasi uu ka socday shir ballaaran oo amniga looga hadlayey.
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay Goobjoog News ka heshay magaalada Garoowe ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Gaas uu ammar ku bixiyey in xabsiga lasoo dhigo Labadii mas’uul ee gacan ka hadalka dhex maray.
Shacabka Puntland ayaa aad u hadal haya falkaan dhacay, waxaana la ogeyn sidey wax ku dambeyn doonaan.
Waxgaradka Hiiraan Oo Ku Baaqay In La Joojiyo Dagaallada Baladweyne
by cialis tablets in frankfurt pharmacy cialis american expr...
cialis online/canada cialis san diego cialis price [url=http...
[url=https://cialisave.com/]buy cialis online[/url] cialis p...
brand name viagra generic viagra viagra phamacy stores in oh...